Skate City, ny mpamorona ny Adventure nataon'i Alto dia manambara ny lalao skateboard vaovao | Vaovao IPhone
Tsy mpankafy lehibe an'io lohateny io manokana aho, fa rehefa mizaha ny fizarana lalao video amin'ny App Store izahay, iray amin'ireo lalao asongadinay hitantsika matetika ny Alto's Adventure, lohateny noforonin'i Snowman. Raha tianao ny zavatra noforonin'izy ireo teo aloha, dia faly ianao mandre fa niara-niasa tamin'ny Agens i Snowman ary nanambara Tanànan'ny Skate, lalao izay mety tianao angamba toa ilay teo aloha fa Skateboard no tena fanatanjahantena fa tsy Snowboard.
Ny ekipa Snowman sy Agens dia nilaza fa tiany ilay Skateboard nandritra ny fotoana ela ary ny fizarana ny fitiavany an'ity fanatanjahantena ity dia nahatonga azy ireo hiaraka hamorona lalao momba izany. Ryan Cash, mpanorina ny Snowman, dia nanazava ny fiantraikan'ny lalao Tony Hawk's Pro Skater taminy tamin'ny famoronana ny Alto's Adventure.
Skate City dia teraka tamin'ny filan'ny Skateboarding an'ny developer roa
Araka ny hitantsika tamin'ny segondra farany amin'ny horonantsary fampiroboroboana an'i Skate City, ny sary amin'ity lalao Skateboard vaovao ity dia ho tsara lavitra noho ny an'ny Alto's Adventure, saingy mino aho fa afaka manome toky fa tsy izy ireo no ho teboka matanjaka amin'ny lalao , na manantena izahay fa Aza. Ahoana raha sitrany ireo sary ireo dia ny fahaizany mampiseho ny tontolo iainana metropolitan mihetsika miaraka amin'ny fifamoivoizana, mpandeha an-tongotra ary zavatra hafa. Hita ihany koa fa hiova ny toetr'andro.
Raha ny hevitro, ny ny horonantsary teo aloha dia manandrana misarika ny sain'ny mpanao skat mihoatra lavitra noho ny fampisehoana ny lalao, zavatra izay asehon'ny 58 segondra izay ahitanao sary (ratsy) an'ny skateboarder mivezivezy amin'ny scenario samihafa sy ny sary 6 segondra fotsiny an'ny lalao. Amin'izay ihany dia tsy afaka hahafantatra bebe kokoa momba ny mety ho toetran'ny Skate City isika fa, raha mahavita ny antsasaky ny lazan'i Alto's Adventure dia afaka milaza isika fa ho fahombiazana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Skate City, nanambara ny lalao Skateboard vaovao ireo mpamorona ny Adventure Alto
Mampanantena fiasa bebe kokoa amin'ny Tim TV i Tim Cook